उपत्यकामा एक साताका लागि निषेधाज्ञा लागू , के गर्न पाइन्छ ? के गर्न पाइन्न ? (आदेशको पूर्णविवरणसहित) – Himalaya Television
उपत्यकामा एक साताका लागि निषेधाज्ञा लागू , के गर्न पाइन्छ ? के गर्न पाइन्न ? (आदेशको पूर्णविवरणसहित)
२०७८ वैशाख १३ गते १९:०८
सार्वजनिक र निजी यातायातमा पनि रोक
१३ वैशाख २०७८ काठमाडौं । काठमाडौँ उपत्यकामा यही वैशाख १६ देखि २२ गते मध्यरातसम्म अत्यावश्यक बाहेकका सेवा र यातायात बन्द हुने भएको छ । काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले आज साँभm एक आदेश जारी गर्दै अत्यावश्यक बाहेकका सबै सेवा बन्द गर्ने निर्णय गरिएको जनाइएको छ ।